Markaan suuqgeyneyno, marar badan, waxaan ka fikirnaa kaliya natiijooyinka. Waxaan rabaa inaan badalo rajadan badan, waxaan rabnaa inay dadku ka feejignaadaan wax soo saarka X, waxaan rabaa retweets / saamiyadaan badan, iwm. Ha iga qaldan, waa hubaal inay muhiim tahay in lala socdo waxyaabahan si loo ogaado hadii suuqgeena fariin ayaa shaqeyneysa. Si kastaba ha noqotee, waxaan ogaaday in markaan ujeedo gaar ah aanan uheyn fariimaheyga suuqgeyga, waxaan helay kaqeyb qaadashada ama natiijooyinka ugu badan.
Marka xigta waxaad haysaa wax aad dhahdo oo laga yaabo inay ka badan yihiin fikradaha ku saleysan qiimeynta, qor. Aragtidaada ka dhiibo. Xitaa haddii dadku aysan oggolaan, waxaad weli bilaabi kartaa wadahadal macno leh oo dadku ku raaxeysan doonaan oo ay wadaagi doonaan.